Ipharadesi elibuka izinyoni eMindo
Mindo, Pichincha, i-Ecuador
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Julia
Ikhabethe elithokomele, elizimele elilala ababili, uhambo lwemizuzu emi-3 nje ukusuka edolobheni. Ingadi inikeza ubumfihlo futhi ibamba izinhlobo zezinyoni ezingaphezu kuka-50. Ikhabethe linekhishi eligcwele, igumbi lokulala elihlukile, indlu yokugezela nomshini wokuwasha. Lena indawo yokuphumula ephelele yomuntu oyedwa noma ababili. I-inthanethi iyatholakala.
Kuyimfihlo futhi nokho kusondele kakhulu kuyo yonke into oyifunayo edolobheni. Ungakwazi ukuhamba kalula ukuya edolobheni ngemizuzu nje.
Kuningi okufanele kwenziwe eMindo, futhi ikhaya lami lisemaphethelweni edolobha. Nethezeka, jabulela imvelo, ukuyothenga nezindawo zokudlela kanye nempilo enhle yezinyoni ngaphandle nje komnyango ongaphambili!
Ngiyatholakala ukuze ngikusize uhlele okuningi noma okuncane ngokuthanda kwakho. Ngingumhlahlandlela wezinyoni ochwepheshile onconywa yincwadi yomhlahlandlela ye-Lonely Planet. Futhi ngingakunikeza ngohambo oluqondisiwe lokubuka izinyoni.